Madaxweynaha K/Galbeed Oo Xariga Ka Jaray Xafiiska Hay”adda Socodalka Jinsiyadda
August 31, 2019 F.G 0
Magaalada Baydhabo Waxaa Maanta xariga laga Jaray Xafiiska Arrimaha socdaalka Laanta Baydhabo kasoo qeyb galay Agaasimaha ku-xigeenka Hay”adda Socodalka Jinsiyadaha Soomaaliya, Mas’uliyiin ka socday wasaaradda Arrimaha Dibada dowladda Federaalka iyo Agaasimaha Hay”adda Socodalka Jinsiyadda Laanta Sedaxaad ee Maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane C/Casiis Xasan Maxamed Lafta’gareen ayaa ugu horeen u mahadceliyay Dowlada Fedaraalka Soomaaliya, isagoona Xafiiskan k tilmamey Nasiib wanaagsan in Bulshada Reer Koonfur Galbeed Adeegyadii ay u aadi jireen Muqdisho Fadhigooda looogu Keenay. Xafiiska Arrimaha Qunsuliyadaha Laanta Baydhabo ayaa Noqoneya kii ugu horeyay oo laga hergaliyo Dowlad Goboleedyada dalka waana Xafiiska labaad ee Qunsuliyadda Soomaaliya.
Wasiirka Amniga Jubbaland Oo Lagu Xiray Magaalada Muqdisho Iyo Sababta Ka Danbeeyso Oo La Ogaaday
Ciidamo ka tirsan kuwa amniga dowlada Soomaaliya ayaa Magaalada Muqdisho ku xiray Wasiirka amniga dowlad Goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan,kadib markii uu soo gaaray Muqdisho. Warar ayaa sheegaya in Wasiir Janan xiliga la qabanayay uu ku sugnaa Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde uuna ka yimid Kismaayo,isla markaana kusii jeeday Magalada Addis Ababa ee Caasimadda dalka Itoobiya. Sidoo kale Wasiirka amniga maamulka Jubbaland ayaa loo heystaa eedeymo la xiriira xadgudub dhanka bani’aadannimada oo ka dhacay Degmada Doolow ee Gobolka Gedo. Horey ayaa Booliska Soomaaliya waxaa uu Cabdirashiid Nuur Janan ugu soo oogay dembiyo kala duwan,isla markaana waxaa la sheegay in uu jiray amar lagu bixiyay in la soo qaban karo,sidoo kalena la horkeeni karo Maxkamad. Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa kal horey laashay Go’aankii dacwada looga gudbiyay Wasiira amniga maamulka Jubbaland iyo amarkii lagu bixiyay la soo qabto,kadib warqad ka soo baxday Bishii April ee sanadkan Maxkamada Gobolka Banaadir.
M/ Jubbaland”Xayiraada D/Federalka Wax Saameeyn ah Naguma Yeelan Karto Mana ahan Muqdisho Iyo Dhagaxii Lagu Xirayay”
War ka soo baxay Maamul goboleedkada Jubaland ayaa lagu sheegay inaysan wax saameyn ah ku yeelan doonin go’aankii ay dowlada federalka ugu soo rogtay xayiraada diyaaradaha tooska u taga magaalada Kismaayo. War-saxaafadeed kasoo baxay Maamulka Jubaland ayaa lagu sheegay in aysan waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka go’aanka dowlada federalka ka gaartay doorashada Jubbaland iyo duulimaadyada taga magaalada Kismaayo. “Go’aanada ka soo baxay Golaha Fulinta iyo Wasaarada gaadiidka dowlada federalka ee ku saabsanaa duulimaadyada diyaaradaha ee Jubbaland iyo doorashada lagu tilmaamay sharci darro waa mid aan waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka,”ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Maamulka Jubbaland. Qoraalka ayaa lagu sheegay in Jubbaland ay iska difaacayso ficilada dowlada federalka waxanaa loogu baaqay Golaha Shacabka iyo Aqalka sare inay qaataan doorkooda lana xisbaatamaan dowlada Federalka. Halkan hoose ka aqriso
SAWIR;Degmada Buule Burte Ayaa Noqoneysa Degmadii Labaad ee Yeelaneysa Gole Deegaanka
Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta xariga ka jaray Munaasabada dhismaha Golaha deegaanka degmada Buulo Burte. Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle ayaa labadii cisho ee la soo dhaafay ku sugnaa Buulo Burte, isagoo maanta dib ugu soo laabtay Muqdisho. Labadii cisho ee uu joogay magalada Buulo Burte ayuu xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo maamulka hirgeliyay, isagoo dhagax dhigay mashaariic kale. sidoo kale uu Khudbad ka jeediyay Munaasabadda lagu daah furayay dhismaha gole deegaan ay yeelato Buulo Burte ayuu sheegay in Dhismaha Golaha Deegaanka ay ku xiran tahay Mashaariicyo badan oo la filayo in laga Hirgaliyo Degmada Buulo Burte. Waxaa uu ammaan u jeediyay shacabka ku dhaqan Buulo Burte isku duubnimadooda iyo sida ay uga shaqeeyaan nabadgelyada iyo horumarka deegaanka. Degmada Buulo Burte ayaa noqon doonta degmadii labaad oo ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo yeelata Gole deegaan, haddii la soo gabagabeeyay howlaha dhismaha golaha deegaanka.
Weerar Bam gacmed Oo Lagu Qaaday Saldhig Bolis Magaalada Jowhar ee Hirshabelle
Warar laga Helayo Magaalada Jowhar ayaa sheegaya in Kooxo hubeysan ay weerar Ku qaadeen Saldhig Bolis Oo Ku yaala Xaafada Horseed Sida La sheegay Waxaana loo adeegsaday Bam gacmeed . Dad ku sugan Magaalada Jowhar oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in Weerarka kadib la maqlay rasaas xoogan ay rideen Ciidanka Booliska ee Hirshabeelle ee ku sugnaa Saldhiga la weeraray. Sidoo kale Weerarka Bam gacmeedka ahaa ayaa waxaa ka dhashay Khasaaro,waxaana ku dhaawacmay hal Askari oo ka tirsan Ciidankii ku sugnaa Saldhiga iyo qof shacab ah oo xiligaas marayay wadada,waxaana la sheegay in dhaawacooda uu yahay mid fudud. Dhanka kale Weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay laamaha amniga Magaalada Jowhar ee Caasimadda maamulka Hirshabeelle ay uga hadlayaan weerarkii Bam gacmeedka ahaa lagu qaaday Saldhig Ciidanka Booliska maamulkaas ay leeyihiin Xaafadda Horseed ee Jowhar. Si kastaba Ha ahaatee Magalada Jowhar ayaa ah magaloyinka ugu nabdoon dhinaca aminiga
SAWIR:Ciidamada AMISOM Oo La Wareegay Amaanka Dhuusamareeb Iyo Ahlusuna Oo Laga Tiriyay Xilka
Guuto ka tirsan Ciidanka Jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka AMISOM ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb, kuwaasoo ka qeyb qaadanaya sugida amniga Shirweynah Dib u heshiisiinta Galmudug iyo howlaha dhismaha Maamulka Galmudug. Ciidamada Jabuuti oo safar dhinaca dhulka ah uga soo baxay magaalada Beledweyne ayaa soo maray degmada Matabaan iyo Guriceel, waxaana ay si nabdoon ah ku yimaadeen Magaalada Dhuusamareeb. Saraakiil ka tirsan Ciidanka xoogga dalka ee qeybta 21aad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa Ciidamadan ku soo dhaweeyay afaafka hore ee magaalada. Gawaarida gaashaaman iyo kuwa xamuulka ah ee ay Ciidamada Jabuuti ay wateen ayaa lagu arkayay bartamaha magaalada Dhuusamareeb, waxaana ay saldhig ka sameysteen Garoonka diyaaradaha iyo xarumo ku yaalla gudaha Magaalada. Sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan Xafiiska Ra’isulwasaaraha, Ujeedada Ciidamada AMISOM loo geeyey Magaalada Dhuusamareeb ayaa ah cabsi laga qabo Ahlu Sunna Wal-Jameeca in ay dhaq dhaqaaqyo ciidan ka sameyso Magaaladaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa afgambi farsameysan ku sameysay Awoodii Ciidan ee Ahlu Sunna taasoo hadda u muuqato inay meesha ka baxday. Sidoo kale Dowladda ayaa la wareegtay Saraakiishii Ahlu Sunna daacadda [Sii aqri]
Banaan bax Xoogan Oo looga soo horjeedo amarkii lagu soo rogay diyaaradaha ku socda Kismaayo
Banaan bax looga soo horjeedo amarkii dowladda Federaalka ku soo rogtay diyaaradaha ayaa ka socda magaalada Kismaayo, iyadoo boqolaal ruux ay isugu soo baxeen waddooyinka. Banaan baxan oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka Jubbaland ayaa looga soo horjeedaa amarka lagu soo rogay diyaaradaha taga Kismaayo, taasoo ay ku tilmaameen cunaqabateyn iyo go’doomin. Dibad baxayaasha ayaa watay boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo kala duwan oo ay ugu soo horjeedeen go’aanka dowladda. Hey’adda Duulista iyo Saadaasha Hawada dowladda Federaalka ayaa ku amartay diyaaradaha taga Kismaayo iyo kuwa ka yimaada inay soo maraan magaalada Muqdisho, taasoo lagu tilmaamay mid lagu hubinayo dhaq dhaqaaqyada iyo la socodka diyaaradaha ka dega garoonka Kismaayo. Todobaadkii hore ayay aheyd markii Maamulka Jubbaland uu muddo labo cisho uu xayiraad saaray diyaaradaha ka soo dega garoonka Kismaayo, sababo la xiriira doorashadii Axmed Madoobe, isla markaana hakisay diyaaradaha ka yimaada Muqdisho iyo Mas’uuliyiinta dowladda Federaalka.
Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris”Ciidamo aan Tagi Karin Suqa Bakaraha Iyo Suqa Xolaha Maxay Ka Qaban Karaan Dhuusamareeb Oo Nabad ah”
Xildhibaan Maxamed Xasan Idiris ayaa ku eedeeyay Xukuumadda Federaalka inay qalqal amni iyo mid siyaasadeed ka wado magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, halkaasoo maalmihii la soo dhaafay Ciidamo Boolis ah oo laga daabulay magaalada Muqdisho ay gaareen. Xildhibaanka ayaa sheegay in tallaabooyinka ka socda Dhuusamareeb ay u eg tahay afduub siyaasadeysan, waxaana uu ka digay in dowladda ay horseed u noqoto qalalaase amni daro inuu ka dhaco magaalada. “Waxa ka socda Dhuusamareeb waa afduub, Wasaaradda Arrimaha Gudaha wax dib u heshiisiin ah kama wado deegaanka, taas bedelkeed isku dir ayay ka wadaa, maalin hore magaalada waxaa halis u gasho in la isku fara saaro”ayuu yiri Xildhibaanka. Sidoo kale Xildhibaanka ayaa sheegay in Ciidamo Boolis ah oo sugi waayay amniga Muqdisho ay dowladda Federaalka u daabushay meel nabad ah, taasna ay tahay arrin aan maskaxda geli karin. “Ciidamo Boolis ah oo sugi waayay amniga Muqdisho, gaar ahaan Suuqa Bakaaraha, oo aan tagi karin Suuqa Xoolaha iyo 17ka degmo aan amnigooda sugi karin in maanta loo daabulo Dhuusamareeb oo ah meel nabad ah waa wax lala yaabo”ayuu [Sii aqri]
C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) Oo Maanta isku sharaxaya xilka Madaxweynaha Galmudug
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha ee Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa maanta lagu wadaa inuu ku dhawaaqo inuu yahay Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Galmudug ee dhowaan doorashadiisa ka dhici doonto magaalada Dhuusamareeb. C/raxmaan Odawaa oo ah Xildhibaan ka tirsan Golaha Shacabka, ayaa Ololihiisa doorashada Madaxweynaha Galmudug wuxuu maanta ku daah furi doonaa magaalada Muqdisho. Mr Odawaa ayaa ka mid noqon doona mid ka mid ah Musharaxiinta ugu miisaanka culus ee doorashada Galmudug, iyadoo la xusuusto doorkii uu ka soo qaatay dhismihii Maamulkii hore Galmudug ee lagu dhisay Cadaado iyo dhismaha Maamulka Hirshabeelle oo hormuud uu ka ahaa dadaaladii iyo howlihii dhameystirka maamul goboleedyada dalka. Odawaa ayaa noqday taariikhda Wasiirkii ugu da’da yaraa ee soo mara Wasaaradda Arrimaha Gudaha sanadkii 2015, waa mid ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ku soo waxbartay dalalka Suudaan iyo Malaysia, sidoo kale doorar ka soo qaatay horumarinta waxbarashada dalka burburkii kaddib, isagoo madax ka ahaa Jaamacadda SIMAD. Inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin xilliga rasmi ah ee ay dhaceyso doorashada Madaxweynaha, hadana waxaa sii bilowday ololaha iyo loolanka [Sii aqri]
Guddoomiyaha cusub ee Gobolka Banaadir Oo Shir La qaatay Ku Xigeenada maamulkiisa
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Finish) ayaa maanta kulankii ugu horeeyay la qaatay Guddoomiye kuxigeenada maamulka iyo Xoghayaha Guud. Kulankan ayaa ujeedkiisa ahaa in la dardar geliyo howlaha ay dowladda hoose ee Xamar iyo adeegyada kala duwan ay u heyso bulshada ku dhaqan Caasimadda. Guddoomiye Cumar Finish ayaa mas’uuliyinta Guddoonka sare ee Maamulka Gobolka Banaadir ka dhageystay warbixin ku saabsan ammaanka xarunta gobolka Banaadir iyo tan magaalada guud ajaanteed, isagoo xubnahan faray in la dar dar galiyo adeegga loo hayo Bulshada. Sidoo kale Waxaa uu caddeeyay inuu joogteyn doono, isla xisaabtanka, taasoo ah mid ka mid ah tiirarka Siyaasadiisa Hoggaamineed ee uu doonayo in uu gobolka ku maamuli .Korna ugu qaada Dhaqaalaha Mamulka Banaadir.